istiraatiijiyadda imtixaanka iyo qorshaha imtixaanka
Ugu Weyn Ee Qa Istaraatiijiyadda Tijaabada iyo Qorshaha Tijaabada
Istaraatiijiyadda Tijaabada iyo Qorshaha Tijaabada
Dukumiintiga Istaraatiijiyada Imtixaanka waa dukumiinti heer sare ah oo sida caadiga ah uu soo saaro maareeyaha mashruuca. Dukumintigaan wuxuu qeexayaa “Qaabka Imtixaanka Barnaamijka” si loo gaaro ujeeddooyinka baaritaanka.
Istaraatiijiyadda Imtixaanka waxaa sida caadiga ah laga soo qaatay dukumiintiga caddaynta shuruudaha ganacsiga.
Dukumiintiga Istaraatiijiyadda Imtixaanka waa dukumiinti taagan oo macnaheedu yahay inaan badanaa la cusbooneysiin. Waxay dejisaa heerarka hababka tijaabada iyo waxqabadyada iyo dukumiintiyada kale sida Qorshaha Imtixaanku wuxuu ka helayaa waxyaabaha uu ka kooban yahay heerarka ku qoran Dukumintiga Istaraatiijiyada Imtixaanka.
Shirkadaha qaar waxaa ka mid ah 'Imtixaanka Habka' ama 'Istaraatiijiyadda' gudaha Qorshaha Tijaabada, taas oo hagaagsan oo badiyaa waa kiiska mashaariicda yaryar. Si kastaba ha noqotee, mashaariicda waaweyn, waxaa jira hal dukumiinti oo Istaraatiijiyad Imtixaan ah iyo tiro kala duwan oo ah Qorshooyinka Imtixaanka ee weji kasta ama heer imtixaan kasta ah.
Qeybaha dukumiintiga Istaraatiijiyadda Imtixaanka
Baaxadda iyo Ujeeddooyinka
Doorka iyo masuuliyadaha
Isgaarsiinta iyo ka warbixinta xaalada
Heerarka warshadaha ee la raacayo
Tijaabinta otomaatiga iyo qalabka
Cabbiraadaha cabbiraadda iyo qiyaasaha
Khataraha iyo yaraynta
Cilad bixinta iyo dabagalka
Isbedelka iyo maaraynta qaabeynta
Dukumintiga Qorshaha Tijaabada dhinaca kale, waxaa laga soo qaatay Sharaxaadda Badeecada, Soocista Shuruudaha Shuruucda ee SRS, ama Adeegsiga Dukumintiyada Dacwada.
Dukumintiga Qorshaha Imtixaanka waxaa sida caadiga ah soo diyaariya Hogaamiyaha Imtixaanka ama Maamulaha Imtixaanka diiradda dukumintiguna waa in lagu sharaxo waxa la tijaabinayo, sida loo tijaabiyo, goorta la tijaabinayo iyo cidda sameyn doonta imtixaanka.
Ma aha wax aan caadi ahayn in la helo hal Qorshe oo Imtixaan Master ah oo ah dukumiinti guud oo loogu talagalay wejiyada imtixaanka oo marxalad kasta oo imtixaan ah ay leedahay dukumiintiyo Qorshe u gaar ah.
Waxaa jira doodo badan, oo ku saabsan in dukumiintiga Qorshaha Imtixaanka sidoo kale uu ahaado dukumiinti taagan sida dukumiintiga Istaraatiijiyada Imtixaanka ee kor ku xusan ama waa in la cusbooneysiiyaa marwalba si loo muujiyo isbeddelada iyadoo loo eegayo jihada mashruuca iyo howlaha.
Aragtideyda shaqsi ahaaneed ayaa ah in marka wajiga imtixaanku uu bilowdo oo Maamulaha Imtixaanku uu 'xakameeyo' waxqabadyada, qorshaha imtixaanka waa in la cusbooneysiiyaa si loo muujiyo leexasho kasta oo ka timaadda qorshihii hore. Ka dib oo dhan, Qorshaynta iyo Xakamaynta waa waxqabadyo isdaba joog ah oo ku saabsan habka imtixaanka rasmiga ah.
Qeybaha dukumintiga Qorshaha Imtixaanka
Qorshaha Tijaabada id
Noocyada lagu tijaabinayo
Noocyada aan la tijaabin
Shuruudaha ka joojinta
Astaamaha ayaa gudbiya ama ku dhaca shuruudaha
Deegaanka Imtixaanka (Shuruudaha gelitaanka, Shuruudaha Bixitaanka)
Shaqaalaha iyo baahiyaha tababarka
Tani waa qaab caadi ah oo lagu diyaariyo qorshaha imtixaanka iyo dukumintiyada istiraatiijiga ah ee imtixaanka, laakiin arrimuhu way ku kala duwanaan karaan shirkad-shirkad.
Waa maxay Dukumintiga Nidaamka Imtixaanka?
Siyaasadda Imtixaanku waa dukumiinti heer sare ah waxayna ku taal meesha ugu sarraysa ee qaab dhismeedka Dukumiintiga Imtixaanka.
Ujeedada dukumintiga Nidaamka Imtixaanka ayaa ah inuu metelo falsafadda tijaabada ee shirkadda guud ahaan iyo inuu bixiyo jiheyn waaxda imtixaannadu u hoggaansameyso oo ay raacdo. Waa inay khuseysaa labada mashruuc ee cusub iyo shaqada dayactirka.
Dejinta siyaasad ku habboon imtixaan ee maamulayaasha sare, waxay bixisaa qaab dhismeed adag oo ay hawl-wadeennada imtixaanku markaas ku shaqeyn karaan. Tani waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo hubin lahaa sare u qaadidda qiimaha istiraatiijiyadeed ee ku jira mashruuc kasta.
Tusmada Dukumintiga Nidaamka Imtixaanka
1. Qeexitaanka Tijaabada
Ururradu waxay u baahan yihiin inay caddeeyaan sababta ay u tijaabinayaan. Tani waxay saameyn ku yeelan doontaa inta ka hartay dukumiintiga siyaasadeed iyo sidoo kale farsamooyinka imtixaanka oo faahfaahsan oo ay doortaan maamulayaasha imtixaanka ee barnaamijka iyo heerka mashruuca.
Marka laga eego fahamka sababta imtixaanka looga baahan yahay waxaa suuragal ah in lagu caddeeyo ujeeddada baaritaanka u ka dhex jiro ururka. Iyadoo aan la helin isku xirnaanta aasaasiga ah dadaalka tijaabada ayaa loogu talagalay inuu fashilmo.
Tusaale: “hubinta in softiweerku buuxiyo shuruudihiisa”
2. Sharaxaadda habka imtixaanka
Waa muhiim in la dhiso aragti adag oo ku saabsan habka imtixaanka. Waa inaan wax ka qabanaa su'aalaha sida, wejiyada iyo cashar-hoosaadyada hawsha imtixaanku ku jiri doono. Doorarkee ayaa kaqeyb qaadan doona iyo qaab dhismeedka dukumiinti ee laxiriira hawlo kasta, iyo waliba heerarka imtixaanada ee loo baahan yahay in laga fiirsado.
Tusaale: 'dhammaan qorshayaasha imtixaanka waxaa loo qoray si waafaqsan nidaamka shirkadda'
3. Qiimaynta Imtixaanka:
Sideen u qiimeyn doonnaa natiijooyinka baaritaanka, tallaabooyin noocee ah ayaan u adeegsan doonnaa si loo hubiyo waxtarka imtixaanka ee mashruuca?
Tusaale: “Saamaynta ganacsiga ee helitaanka cillad ka dib sii deynta”
4. Heerka Tayada in la gaaro:
Shuruudo noocee ah ayaa la tijaabin doonaa iyo heerkee tayada ah ee nidaamka looga baahan yahay inuu gaaro ka hor inta aan la siideyn iyada oo la tixraacayo shuruudahan?
Tusaale: 'cilado darran oo aad u sarreeya intaan alaabtu sii deynin'
5. Kusoo dhowaanshaha Hormarinta Nidaamka Imtixaanka
Immisa jeer iyo goorma ayaan qiimeyneynaa waxtarka howlaha socda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin hagaajinta iyo farsamooyinka loo isticmaali doono hagaajinta howlaha.
Tusaale: 'shirarka dib u eegista mashruuca ee la qaban doono ka dib marka la dhammeeyo mashruuca'
qulqulka java 8 tusaale
shaqooyinka qoraalka bash shell
Aasaaska Jabsiga Anshaxa
Generation Number Random Java
Riwaayado Bash oo Tusaalooyin ah
Xeeladaha Tusaalaha Istaraatiijiyada Tijaabada Agile
Noocyada Xogta Python iyo Nooca Beddelidda
Selenium CSS Xulashada Tusaalooyinka